आउनुहोस् गोपनीयता र मानकलाई प्रकट गर्नुहोस् र | Martech Zone
आउनुहोस् गोपनीयता र मानकलाई प्रकट गर्नुहोस्
शनिबार, अगस्ट 7, 2010 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
गुगल र फेसबुकले निरन्तर प्रभुत्व जमाइरहेको छ हो विशाल गोपनीयता चिन्ता त्यो ईन्टरनेटमा उठाईएको छ ... र ठीक नै।
हामी दिनभर तर्क गर्न सक्दछौं कि कसरी साइटहरू स collecting्कलन गर्ने, प्रयोग गर्ने वा तपाईंको व्यक्तिगत डाटा बेच्ने… वा उनीहरू सक्षम हुनुपर्दछ कि हुनुहुन्न पनि… तर हामीले सम्पूर्ण अवरोध वरिपरि ठूलो समस्या हराइरहेका छौं।
त्यहाँ केहि मुख्य बुँदाहरू छन् जुन म विश्वास गर्दछु।
एक पटक यो कम्पनीको जिम्मेवारी होइन कि कसरी तपाइँको जानकारी को उपयोग गर्ने भनेर एक पटक तपाईले तिनीहरुलाई अन्धाधुन्ध रूपमा प्रदान गर्नुहुँदा ... त्यो हो तपाईंको जिम्मेवारी.
अर्कोतर्फ, उपभोक्ताहरूलाई थाहा छैन कसरी कम्पनीहरूले वास्तवमा उनीहरूको डाटा प्रयोग गरिरहेका छन् - त्यसैले तिनीहरू सही क्रोधित हुन्छन् जब उनीहरूले पत्ता लगाउँदछ कि यो अपेक्षित तरिकाले प्रयोग भएको थियो। टेक्सासको साइकलमा प्वालहरू सहित पट्या are्ग तथा भ्रामक विकल्प र गोपनीयता कथनहरूका पृष्ठहरू उत्तर छैनन्।
यदि कम्पनीले यो डाटा स collecting्कलन गरिरहेको छ भने, त्यहाँ अधिकृतहरू मात्र पहुँच गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा भण्डारहरू राख्नु तिनीहरूको जिम्मेवारी हो।
यसको सट्टा वा गोपनीयताका फाइदाहरू वा कानुनी बहसहरू गर्दा, किन हामी गर्दैनौं सट्टा तपाइँको व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग भएको छ प्रभावी ढ commun्गले संचार गर्नको लागि एक एकीकृत प्रणाली उत्पादन गर्न कम्पनीहरूसँग काम गर्न गोपनीयता उद्योग फोकस गर्नुहोस्। धेरै जस्तै Creative Commons डिजिटल अधिकार प्रबन्धनका लागि खुला स्रोत उत्तर हो, हामीसँग एक गोपनीयता कमन्स हुनुपर्दछ जुन उपभोक्ताले सजिलै बुझ्नको लागि पचाउन सक्दछ। केहि उदाहरणहरू हुन सक्छन्:
वा छैन तिनीहरूको डाटा बिक्री भइरहेको छ तेस्रो पक्षलाई।
वा छैन तिनीहरूको डाटा पहुँच भइरहेको छ तेस्रो पक्षहरू द्वारा।
वा छैन तिनीहरूको डाटा बेनामी कम्पाइल भइरहेको छ र तेस्रो पक्षमा वितरित।
वा छैन तिनीहरूको डाटा बेनामी कम्पाइल भइरहेको छ र आन्तरिक रूपमा वितरित।
वा छैन तिनीहरूको डाटा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भइरहेको छ लक्ष्य।
वा छैन तिनीहरूको डाटा अज्ञात रूपमा प्रयोग भइरहेको छ लक्षित गर्न।
वा छैन तिनीहरूको गतिविधिहरू व्यक्तिगत रूपमा ट्र्याक हुन्छन्.
वा छैन तिनीहरूको गतिविधिहरू अज्ञात ट्रयाक हुन्छन्.
डाटा ट्र्याक र वितरित भइरहेको छ कि साथ साथै हामी यो कसरी उपयोग भइरहेको छ भनेर वर्णन गर्न सक्दछौं:
नाफाको लागि बेच्न।
एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न।
निजीकृत प्रस्ताव र विज्ञापन प्रदान गर्न।
समग्र उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न।
कम्पनीहरूले यति टाढासम्म उपभोक्तालाई व्यक्तिगत डेटा जारी गर्न सक्दछन्। गुगलले वास्तवमै योसँग सुरु गरेको उनीहरूको साथ खाता व्यवस्थापन कन्सोल, जहाँ मँ केहि जानकारीहरु समीक्षा गर्न सक्छु, मेरो इतिहास नष्ट गर्न, वा यसलाई प्रयोग गर्नबाट रोक्न पनि सक्छु।
एक बजार र उपभोक्ताको रूपमा, म चाहन्न रोक मेरो व्यक्तिगत डेटा को उपयोग बाट कम्पनीहरू। म विश्वास गर्दछु जब कम्पनीहरूले मेरो बारेमा जानकारी स collect्कलन गर्न जारी राख्छन्, तिनीहरू राम्रा सेवा दिन सक्षम छन्। उदाहरणको रूपमा, मलाई लाग्छ यो ठीक छ कि एप्पललाई मेरो आफ्नै संगीत लाइब्रेरी थाहा छ, उदाहरणको लागि, किनकि तिनीहरू वास्तवमै मेरो इतिहासमा आधारित केहि बुद्धिमानी सिफारिशहरू गर्छन्।
टैग: तथ्याङ्कडाटा सुरक्षागोपनीयता
एफिलिएट्स पछाडि - निर्माण बिक्री च्यानल
डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगिंग यहाँ छ!